एक जनाको कोरोना परीक्षण गर्न ४५ हजार रुपैया ! कसरी भयो यस्तो, के हो रहस्य ? — Sanchar Kendra
एक जनाको कोरोना परीक्षण गर्न ४५ हजार रुपैया ! कसरी भयो यस्तो, के हो रहस्य ?
काठमाडाैं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा प्रयोगशालाले कोरोनाको संक्रमण भएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्दा झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ।
द न्युयोर्क टाइम्स समाचार पत्रका अनुसार जिएस ल्याब्स नामको उक्त प्रयोगशालाका अमेरिकाभरि विभिन्न स्थानमा ३० शाखा छन्। आफ्नो सेवा उच्च गुणस्तरको भएकाले शुल्क महंगो भएको जिएसले जनाएको छ।
अमेरिकामा सामान्यत: कोरोना परीक्षणको शुल्क २० डलर (२४ सय रुपैयाँभन्दा) भन्दा कम छ। जिएसले एक जनाको परीक्षण गर्दा ३८० डलर (४४ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ) शुल्क लिन्छ। जिएसले लिने यो शुल्क गैरकानुनी भने होइन।
यसअघि नै अमेरिकी कंग्रेसले कोरोना परीक्षणको शुल्क नागरिकले तिर्नु नपर्ने र बीमा कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने कानुन ल्याएको थियो। ‘केयर एक्ट’मा कुनै अमेरिकी नागरिकले सूचीकृत प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गर्दा जति शुल्क लाग्छ त्यो सबै बीमा कम्पनीले तिर्नै पर्ने र तिर्दिनँ भन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही व्यवस्थाबमोजिम जिएसले आफ्नो शुल्क ३८० डलर तोकेको हो। जिएसले आफ्नो प्रयोगशालामा केही मिनेटअघि परीक्षणका लागि बुकिङ गर्न सकिने र परीक्षण गरेको केही मिनेटमै नतिजा आउने सुविधा रहेको उल्लेख गरेको छ।
अहिलेसम्म उसले झन्डै पाँच लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गरिसकेको छ भने अहिले पनि दैनिक हजारौं मानिसले जिएसमा कोरोना परीक्षण गर्ने न्युयोर्क टाइम्सको समाचारमा उल्लेख छ।
जिएसले महंगो शुल्क लिन थालेपछि बीमा कम्पनीहरूले आपत्ती जनाएका छन्। केहीले पैसा तिर्न अस्वीकार गरेका छन् भने केहीले महामारीका बेला अत्याधिक शुल्क लिएको भन्दै अदालती प्रक्रिया थालेका छन्।